အင်တာလင်ဂွာဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
en:Edgar de Wahl
အင်ဒို-ဥရောပဘာသာစကားမှ အခြေခံ၍ တီထွင်ထားသေ ာဘာသာစကား
အင်တာလင်ဂွာဘာသာစကား ([interˈliŋɡwe]; အင်္ဂလိပ်: Interlingue) သည် အက်ဒ်ဂါဒေဝါးမှ ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့သော နိုင်ငံတကာ အရန်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်မှ ဘာသာစကားအတုဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်ကို လေ့လာဖတ်ရှုရပါသည်။ ဤအင်တာလင်ဂွာဘာသာစကားကိုဖန်တီးခဲ့သော အက်ဒ်ဂါဒေဝါးသည် ၎င်း၏ဘာသာစကားကို အမြင့်ဆုံးပုံမှန်သဒ္ဒါနှင့် သဘာဝစရိုက်လက္ခဏာများရရှိရန်အတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ၎င်း၏ဘာသာစကားသည် အခြားဘာသာစကားဝေါဟာရ အမျိုးမျိုးတို့မှ မူလနဂိုရှိပြီးသား ဝေါဟာရစကားလုံးများ၏ ရှေ့ဆက် နောက်ဆက်များကို အခြေခံ၍ သုံးပြုထားပါသည်။
အင်တာလင်ဂွာဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာသော ဝေါဟာရစကားလုံး ပုံစံအများအပြားသည် အနောက်ဥရောပဘာသာစကားအချို့မှ တွေ့ရလေ့ရှိသော၊ အဓိကအားဖြင့် ရိုမန်စီဘာသာစကားများနှင့် ဂျာမန်ဝေါဟာရအချို့တို့ကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။ ၎င်း၏ဘာသာစကား ဝေါဟာရစကားလုံးအများအပြားကို လက်တင် နှစ်ထပ် ကြိယာများမှ ဆင်းသက်လာသော ဝေါဟာရစကားလုံးများအဖြစ်သို့ ပုံမှန်ပြောင်းလဲခြင်းမှလွဲ၍ ကြိယာခြောက်ခုကို ပုံမှန်ပြောင်းလဲနိင်ရန်အတွက် အက်ဒ်ဂါဒေဝါးက စည်းမျဉ်းအစုံ အသုံးပြု၍ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ 
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Interlingue (Occidental)"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ Kosmoglott, 1922, p. 1။
↑ Cosmoglotta B, 1945, p. 8။
↑ Cosmoglotta A, 1946, p. 18။
↑ Occidental A, 1946, p. 24။
↑ Kosmoglott, 1925, p.40။ “Translation: "I found the most precise sense of "-atu" for example no earlier than 1924 ... maybe with time I will also find the precise sense of "-il, -esc, -itudo", etc."”
↑ Cosmoglotta B, 1947, p. 15။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်တာလင်ဂွာဘာသာစကား&oldid=728132" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။